Otu esi achọta ndị na-emetụta TikTok maka mkpọsa ahịa - AudienceGain
Otu esi achọta ndị na-emetụta TikTok maka mkpọsa ahịa
Ịghọ ngwa kachasị ewu ewu n'ụwa niile, TikTok bụ ebe na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ihe okike ha na ịchụso mmasị ha na nnukwu ahịa nwere ike maka azụmahịa ndị chọrọ ịgbasa ahịa ndị ahịa na ịbawanye ego ha nwetara.
Mana kedu ka ụlọ ọrụ nwere ike isi rute ahịa a nwere ike ime? Ịhọrọ na ịrụ ọrụ na ndị na-eme ihe TikTok ziri ezi ga-eme ka mgbasa ozi ahịa gị na-aga nke ọma na ọtụtụ mmadụ mara ya. Edemede na-esote ga-egosi gị Otu esi ahọrọ ndị na-emetụta TikTok ziri ezi maka mkpọsa ahịa maka mkpọsa kacha aga nke ọma.
Otu esi achọta ndị na-emetụta TikTok
Enwere ọtụtụ ụzọ ị ga - esi chọta ndị na - emetụta TikTok mana n'okpuru, anyị ga - egosi gị ụzọ ise kachasị dị irè iji chọpụta ndị na - emetụta TikTok:
Kedu ka esi achọta ndị na-eme ihe na Google?
Ụzọ mbụ anyị si eche na onye ọ bụla maara bụ ime nyocha na Google. Nke a bụ ụzọ dị mfe ma dị ọnụ ala chọta ndị na -eme TikTok. Ọ ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ịmalitere mkpụrụokwu ndị nwere nkọwa sara mbara wee wedata ka ị na-ahụ ahịa ziri ezi maka gị.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọ "Top TikTok Influencers" na mbụ, wee wedata site na niche ma ọ bụ ọnọdụ dị ka "Top TikTok influencers in the fashion / industry/ industry" ụlọ ọrụ nri / ..." ma ọ bụ "Top TikTok influencers na US..."
Ihe hashtag bụ igodo
N'elu ikpo okwu TikTok, hashtags bụ akụkụ dị mkpa, akụkọ ọ bụla na-eji ha. Dịka Google, ịkwesịrị ịchọ "#" metụtara ụlọ ọrụ ma ọ bụ niche azụmahịa gị na-ezubere iche. Ọ bụrụ na ịchọta onye na-eme ihe na-eji "#" ị na-achọ, enwere ohere zuru oke na ndị na-ekiri ha / ndị na-eso ụzọ ha nwekwara mmasị na isiokwu "#" ahụ.
Ịkwesịrị ịdepụta mkpụrụokwu ndị na-amalite na # dị mkpa maka ụlọ ọrụ na usoro iji lelee anya. Lelee anya wee họrọ nke ọma ka ịchọta onye na-eme ihe ziri ezi maka mkpọsa ahụ. Ọzọkwa, gbalịa soro “#” na-ewu ewu maka mmelite oge niile n'ihi na omume na TikTok na-agbanwe ngwa ngwa.
Ozugbo ịchọtara onye na-eme ihe ziri ezi maka mgbasa ozi ịre ahịa gị, ị kwesịrị iru ma soro ha rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ha enweghị ozi kọntaktị na TikTok, nwaa ịchọ nyiwe ndị ọzọ dị ka Facebook, Instagram…
Gafee-nyochaa nyiwe ndị ọzọ
N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na ịmara ụfọdụ ndị na-eme ihe kwesịrị ekwesị maka mgbasa ozi ahịa a na netwọkụ mmekọrịta dịka Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, wdg, lelee ma ha na-eji TikTok. Ọ bụrụ otu a, egbula oge ijikọ wee soro ha rụkọọ ọrụ.
Site n'ịbụ ma ndị na-eme ihe n'ọtụtụ ikpo okwu na inwe onyinyo ziri ezi maka ika gị, ndị a ga-eme ka mkpọsa gị gaa nke ọma.
Lelee asọmpi ahụ
Iji chọta ndị na-eme ihe ziri ezi na TikTok, azụmaahịa nwere ike soro ndị asọmpi ha wee chọpụta ihe ha na-eme na TikTok yana ndị ha na ha na-arụkọ ọrụ. Nke a bụ ezigbo ụzọ dị irè iji nyere gị aka ịma ụdị ọdịnaya na ụdị mmetụta dabara adaba yana ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya masịrị gị.
Mgbe ịmara nke mmetụta ndị na-asọmpi gị na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọghị ịrụ ọrụ na otu ndị asọmpi, ị nwere ike ịchọ onye ọzọ influencer nwere ụdị ụdị ma ọ bụ ọkwa mmetụta nke na-ejikọtabeghị na onye ọ bụla.
Chọta na TikTok Onye Okike Market
Ahịa TikTok Onye Okike
Ụzọ ikpeazụ anyị chọrọ igosi gị n'isiokwu a bụ ịchọta ndị okike ziri ezi na TikTok Onye Okike Azụmahịa. Site na ebe a na-ere ahịa TikTok Onye Okike, ị nwere ike ịchọ na imekọ ihe ọnụ na ndị na-eme ihe ziri ezi maka azụmahịa gị.
Ozugbo enyere gị ohere ịbanye n'ahịa, malite ịchọ Pọtụfoliyo nke ndị nwere ike ịmepụta TikTok. Kpọmkwem, ikpo okwu a ga-enye gị ozi zuru oke gbasara ndị na-eso ụzọ mmetụta, mmekọrịta, iru, ọnọdụ, igwe mmadụ.
Ihe ị ga-eme bụ iji ihe nzacha ọchụchọ dị wee chọpụta onye kwesịrị ekwesị. A na-ekewa ihe nzacha ahụ, na-enye gị ohere inyocha ndị na-eme ihe ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Ihe ndetu dị mkpa iji họrọ TikTok mmetụta zuru oke maka azụmahịa gị
Họrọ ndị kacha dabara adaba
N'ikwu nke ahụ, TikTok bụ ahịa nwere ike ime n'ihi na ọ nwere ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ kwa ọnwa. Ọ bụ ya mere ọnụ ọgụgụ ndị na-eme ihe n'elu ikpo okwu a abụghị obere. Yabụ, iji jiri onyonyo azụmaahịa gị họrọ nke kacha dabara adaba na TikTok, ị kwesịrị ịtụle ihe atọ ndị a:
Iji nwee ndị na-ege ntị na-eguzosi ike n'ihe na TikTok, ndị na-eme ihe ga-emerịrị ọdịnaya na-agbanwe agbanwe ma wetara ndị na-ekiri ọtụtụ uru.
Ya mere, ndị na-eme ihe TikTok na-ejikarị nlezianya na-ahọrọ ngwaahịa / ụdị iji kpọsaa. Ha ga-ahụ ma ọ dị mma ma nwee otu ụdị na uru ọwa ha chọrọ…
Yabụ, mgbe gị na ndị na-eme ihe na-arụ ọrụ na TikTok, ị ga-enyocharịrị ma nyochaa ọwa ha tupu ịrịọ ka ị kwadoo. Usoro nyocha ga-ada mgbagwoju anya, ma ihe isi ike a agaghị abụ ma ọ bụrụ na ịchọta ndị na-eme ihe ziri ezi ma mee ka mgbasa ozi ahịa gị gaa nke ọma.
Mgbe ị na-emekọ ihe ọnụ, ịmalite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa, ọkachasị ma a bịa na mmekorita n'ịntanetị.
Ndị ọchụnta ego kwesịrị ijide n'aka na ndị na-eme ihe na-atụkwasị obi n'ịdị mma ngwaahịa na onyonyo akara ha na-akwalite. Ọ bụrụ na ha atụkwasịghị obi, ha nwere ike ịdị elu, na onye nnọchiteanya ekwenyeghị na mmepe ahụ, n'ezie ndị na-ekiri ga-abụkwa.
Agbanyeghị, na tiori, mgbe mmadụ na-achọ ire gị ngwaahịa, anaghị anabata ihe ntụrụndụ, ọ dị iche na ikpo okwu TikTok. Ndị ọrụ agaghị akwụsị ikiri ogologo oge ma ọ bụrụ na vidiyo onye mmetụta anaghị etinye aka.
Yabụ, azụmaahịa kwesịrị ịhọrọ ndị na-eme ihe nwere ọdịnaya na-etinye aka, dị ka ọchị, ntụrụndụ, wdg… ma ọ bụrụhaala na ha na-ewetara ndị na-ekiri uru.
Ị na-achọ mgbe niile maka onye na-emetụta ihe kacha ewu ewu?
Ọ dị mkpa ịhọrọ ndị na-emetụta TikTok pụtara ìhè?
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-ahọrọ ndị na-eme ihe na TikTok, ọkachasị, ụdịdị na-ahọrọ ndị na-eme ihe kacha emetụta. Ha kwenyere na ndị na-eme ihe nkiri a ga-ewetara ha uru kachasị ukwuu yana ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ kacha mkpa. Otú ọ dị, n'eziokwu, ihe adịghị mfe.
Ndị na-emetụta ihe karịrị nde 1 na-eso ụzọ dị mma maka ịkwalite ngwaahịa na ịkwalite aha ika gị. Ya mere, nnukwu ụlọ ọrụ na-ejikarị ụzọ a maka mkpọsa ahịa ha. N'ezie, dị ka nnukwu azụmaahịa, ụzọ a nwere ike ịbawanye uru ha.
N'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na obere azụmaahịa na ndị na-ajụ obere ka na-ahọrọ ịga na ntụziaka a, ịwụsa nnukwu ego na Big KOL na-ejighị n'aka na ịdị irè ọ bụghị mgbe niile bụ nhọrọ nwere ọgụgụ isi. N'ihi ya, ọtụtụ mgbasa ozi ụdị mpaghara ugbu a na-elekwasị anya KOCs, ndị na-eme ihe nwere obere ihe na-eso ya mana ndị ahịa na-azụ ahịa.
N'ihi ya, ndị na-eme ihe n'etiti 500,000 na 1 nde ndị na-eso ụzọ nwere ike ịmepụta ọnụego ntinye aka kacha mma. Nhọrọ a iji soro ndị na-eme ihe na-akpakọrịta ga-enyere gị aka ịmepụta uru ma chekwaa gị nnukwu ọnụ ahịa mbụ.
N'ikpeazụ, ndị mmadụ nwere ndị na-eso ụzọ 10 ruo 500,000 nwekwara ike iweta azụmahịa gị ọtụtụ uru ma ọ bụrụ na etinye ya nke ọma. Ị nwere ike iso ndị na-eme ihe ike na-akpakọrịta kpamkpam ka ị nweta niches. Kama itinye ego buru ibu iji were onye na-eme ihe ike were, ị nwere ike mefuo ego wee were ụfọdụ ndị na-emetụta obere mmetụta. Mmetụta sitere na micro-influencers ndị a agaghị ekwe ka ị daa ma echegbula ma ọ bụrụ na mmadụ mehie.
Otu esi eme atụmatụ ịre ahịa mmetụta gị na TikTok
Iji mezuo Strategy Marketing Marketing na TikTok, anyị na-akwado ka ị ghara ịnwa ịchịkwa otu ha si eme ihe kpamkpam. N'ụzọ megidere nke ahụ, nkwanye ùgwù na ka ha nweere onwe ha ịmepụta n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Anyị ga-agwa gị ụfọdụ ihe dị mkpa maka mkpọsa na-aga nke ọma:
Ozi gị na ọdịnaya
Dịka anyị kwuru n'elu, hapụ ndị na-eme ihe gị n'efu ka ha mepụta ihe kacha mma na ya, ọ bụrụhaala na ọ dabara ngwaahịa na ebumnuche gị. Ị ga-arịba ama na ị kwesịrị iwulite ọdịnaya ka ngwaahịa gị dị ka eke ma nwee ụzọ dabara adaba maka ndị ahịa e lekwasịrị anya na azụmahịa ahụ na-ezubere iche.
Nke a bụ ụfọdụ ndị na-emetụta ọdịnaya na-ejikarị akwalite ngwaahịa:
Ihe ịma aka
Egwu ndị a na-ewu ewu
Igwe onyonyo edobere
Mmepụta na igbu
Ozugbo ị kwekọrịtara na ọdịnaya ịchọrọ ịmepụta, oge eruola imepụta ya. Maka ahụmịhe onye ọrụ kachasị mma, ị ga-ahụrịrị na vidiyo ahụ dị elu ma nwee ụda dị mma. Ị nwere ike soro egwu na-agbanwe agbanwe iji mee vidiyo gị. I kwesịkwara ịhazi ọdịnaya ka itinye aka ma nwee mmasị na niche gị tupu ndị na-emetụta ya ebipụta ya.
Na mgbakwunye, ị ga-arịọkwa ndị na-eme ihe ka ha jiri hashtags na-ewu ewu, hashtags metụtara ngwaahịa na ụdị iji mee ka vidiyo ahụ dịkwuo nje ma mụbaa mmata ika.
Otu ihe dị mkpa nke ụlọ ọrụ na-ekwesịghị ileghara anya bụ ịlele nsonaazụ nke mgbasa ozi ahịa ha ka oge na-aga. Metiriks ị kwesịrị soro bụ ọnụego njikọ aka, nlele vidiyo, ndị na-eso ụzọ, oke, nkwupụta, na karịsịa mgbanwe ịzụrụ ngwaahịa.
Ihe ikpeazụ ịchọrọ iburu n'uche ka ị nwee mkpọsa azụmaahịa na-aga nke ọma na TikTok na-ebuli elu. Ndị ọchụnta ego kwesịrị inyocha akara ngosi arụmọrụ iji hụ ma ọ dị ha mkpa ịgbanwe ma ọ bụ tweak posts na mgbasa ozi ha ka ọ na-aga nke ọma.
Ị kwesịrị ị na-anwale ma na-ebuli ọdịnaya gị iji kwalite arụmọrụ vidiyo gị na mkpọsa gị na-esote.
Ya mere, isiokwu anyị dị n'elu enyerela gị aka ịmata Otu esi achọta ndị na-emetụta TikTok maka mkpọsa ahịa ahịa. Ịhọrọ ndị na-eme ihe ziri ezi na-enyere ndị ọchụnta ego aka ịga nke ọma na mkpọsa ha ma chekwaa ha nnukwu ego, ọkachasị maka obere ụlọ ọrụ na nke ọkara. Akwụsịla ileghara nnukwu ahịa a anya.
Maka ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị site na:
Atụmatụ 7 kachasị ọhụrụ gbasara otu esi eto eto na YouTube 2022
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ka esi eto eto na YouTube 2022, ị ga-achọ ilebawanye anya na ọwa gị yana ọtụtụ metrik ndị ọzọ na YouTube.
Kedu ihe ị kwesịrị ịtụle ma ọ bụrụ na ịmalite ọwa YouTube 2022?
Ịmepụta ọwa YouTube dị mfe ugbu a maka onye ọ bụla. Agbanyeghị, n'ihi na netwọkụ vidiyo a ma ama na-ejupụta na ihe vidiyo mara mma, ụzọ gị…
Ndụmọdụ 8 iji nweta ihe ịga nke ọma na YouTube ngwa ngwa n'enweghị obi abụọ
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ịghọ YouTube adịghị ike, ọ pụtaghị na ị nwere ike nweta ihe ịga nke ọma na YouTube ozugbo ma ọ bụrụ na itinye na ...
Mustkwesịrị ịbanye na biputere nkọwa Banye
Mmejọ 8 YouTube a na-emekarị ka ịzenarị na 2022
Ego YouTube ọwa
Ejiri ibe Facebook
Service 1 Botted Channel ($190)1 Channel Toro n'ụzọ anụ ahụ ($490)
Service Peeji Ntughari Mgbasa Ozi Na-abanye